Nhau - Pesticide iri pakati
Mishonga yezvipembenene inzira yakakosha yekugadzira mukugadzirwa kwekurima, iyo inoita basa rakakosha mukudzora zvirwere, tupukanana nemasora, kudzikamisa nekuvandudza goho rezvirimwa.
Kunyangwe ichikanganiswa nemutengo wezvigadzirwa zvekurima, nzvimbo yekudyara, mamiriro ekunze, kuwanda uye zvimwe zvinhu, kutengesa kwemishonga yezvipembenene kunounza kumwe kuchinjika kwekufamba kwegore negore, asi kudiwa kuchiri kwakaomarara.
Sekureva kwedata kubva kuNational Bureau ye Statistics, kugadzirwa kwemishonga yekuuraya zvipuka munyika yose kwakaratidza kudzikira kubva muna 2017.
Muna 2017, kuburitswa kwemakemikari mishonga yekuuraya zvipuka kwakadonha kusvika pamatani emamiriyoni 2.941, asi muna 2018 kwakadonha kusvika pamamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu. Mu2019, kuburitswa kwemakemikari mishonga yekuuraya zvipuka kwakamira kudonha uye kukwira kusvika mamirioni 2.2539 ematani, kukwira 1.4 muzana gore pagore.
Mumakore achangopfuura, China yechipukisi indasitiri yekutengesa mari seyakazara yakaramba ichiwedzera maitiro.
Muna 2018, nekuda kwekuvandudzwa kwemishonga yezvipembenene uye kukwira kwemitengo yezvigadzirwa, pamwe nekuwedzera kwekudiwa kwemishonga yezvipuka muzvirimwa zvemari zvakaita sedonje nezvivakwa, indasitiri yemari yekutengesa yaive nezve 329 bhiriyoni yuan.
Inofungidzirwa kuti saizi inokwanisika yemusika wekurima kweChina ichiri kutarisirwa kukwira muna 2020.
Mhando dzakasiyana dzemishonga yekuuraya zvipuka dzinoda akasiyana epakati mukugadzira maitiro.
Chigadzirwa chinogadzirwa nekugadzirisa zvekurima zvekushandisa zvakare iri yepakati svikiro iyo inosanganisa maviri kana anopfuura zvinhu pamwechete.
Mune mishonga inouraya zvipembenene inogona kunzwisiswa se synergist, inozivikanwawo sevanopindirana venyama.
Pakutanga zvinoreva kushandiswa kwemarasha tara kana peturu zvigadzirwa sezvinhu zvakasarudzika zvekusanganisa kwezvinonhuwira, dhayi, resini, zvinodhaka, mapurasitiki, rabha yekuwedzera uye zvimwe zvigadzirwa zvemakemikari, zvinogadzirwa mukugadzirwa kwepakati zvigadzirwa.
Iko kusanganisa kweanopindirana kunowanzoitwa mune iyo reactor, uye iwo anogadzirwa epakati anopatsanurwa nekucheneswa, kazhinji nekombiki yekubvisa.
Pesticide intermediates uye chloroform kudhizaina makemikari bhizinesi yakajairika unit oparesheni, echinyakare mashandiro maitiro anowanzo gashira iyo distillation ikholamu, iyi mhando yekushanda maitiro yakaoma, yakaderera kuburitsa kugona, simba rekushandisa rakakura, nekudaro nekudzika kwenzvimbo dunhu chikamu chevashandi uye kufambira mberi kwekugadzira tekinoroji, mazhinji mabhizinesi anotanga kukwidziridza tekinoroji, uye sarudza inoshanda zvakanyanya maitiro ekushanda.